Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Fumanisa iiRolli zeentsuku ezinomdla kwiNkcubeko yeGenoa
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Oktobha 2, 2021
Iintsuku zikaRolli kwiNkcubeko yeGenoa
Ababhenkethi baya kuba neentsuku ezisixhenxe zokufumana ubugcisa base-Italiya kwizigodlo ezinkulu zoKuvuselelwa kunye neeBharique kwiSixeko saseGenova e-Itali.
Ukuhambela eGenoa kwiinkulungwane zegolide, phakathi kwemifanekiso eqingqiweyo, iifresco, kunye negadi, kukuvulwa okungaqhelekanga kwezakhiwo zeLifa leMveli le-UNESCO.
Umsitho wenzeka ngo-Okthobha u-4 ukuya ku-8, 2021, ngeVeki yokuThumela ngeRolli, kwaye ukusukela nge-9 ukuya kwi-10 ka-Okthobha ngeentsuku zikaRolli.
Ngethuba lokuqala, kule kwindla, iiNtsuku zeRolli - umsitho ovula iingcango zePalazzi dei Rolli, ilifa lemveli leUNESCO - liza kuhlala iveki.
Ubuncwane besixeko bokwakha likhaya lobugcisa obumanyanisa ubugcisa base-Italiya-iCanova, iAntonello da Messina, iifresco zekhulu le-17, iivayolin zasePaganini, kunye nobugcisa baseYurophu, ngakumbi ubugcisa baseFlemish.
Le veki lithuba lokufumanisa ngembali yesixeko, elinye lamazibuko aphambili eMeditera, hayi kude neAlps kunye Milan. Abakhenkethi badibana neGenoa engazange ibonwe ngaphambili, ezele ngamabhotwe amahle agqibe ubuncwane babo kangangeenkulungwane: iiyadi, iigadi, imijikelezo yeefrescoes, imifanekiso eqingqiweyo evela kuRenaissance ongasekhoyo, naseBaroque.
Utyelelo lwenziwa kukhuseleko olupheleleyo kwaye ngokuhambelana nemigaqo ye-COVID-yasimahla, kodwa ngoxanduva lokugcina, kunye nokuvulwa kwamabhotwe kukhatshwa yikhalenda etyebileyo yemicimbi yesibambiso.
Ukutyelelwa kumabhotwe nakwizikhumbuzo ziqala ngeVeki yokuThumela ngeRolli (nge-4 ka-Okthobha i-8-XNUMX) ngokusebenzisana nayo IVeki yokuThumela ngenqanawaIsiganeko esenzeka kabini esidibanisa abaqhubi bamazibuko, baselwandle kunye nolungiselelo kwihlabathi liphela. Amabhotwe abamba iinkongolo kunye neminyhadala yenkcubeko, ngaphandle koluntu lwaselwandle - indlalifa kwimbali yakudala, yeRiphabhlikhi yaseMaritime evulelekileyo eluntwini.
ngoncedo lukaLaura Guida
Iintsuku zangempela zeRolli (ngo-Okthobha 9-10) zilungele ukufumanisa isixeko ngesantya somntu, sikhokelwa ngamabali eengcali kunye nabanxibelelanisi bezenzululwazi abathe babalisa amabali, ii-anecdotes, kunye nemimangaliso ye "Superba," ukumkanikazi waseMeditera. Iintsuku ezimbini zokuzonwabisa ezingapheliyo kunye nokutyelela ukutyeba ezona ndawo zinomtsalane zesixeko- amabhotwe eRolli kunye neendawo zokuhlala, iigadi, iimyuziyam kunye noovimba, kubandakanya izakhiwo ezininzi ezivulekileyo kuluntu kulo msitho.
Umzekelo, izakhiwo ezintle zeStrada Nuova - iPalazzo Doria Tursi ebabazekayo, kunye neegadi zayo ezimbini - zibonisa ivayolin nguPaganini, ingqokelela yobugcisa beFlemish, kunye nomsebenzi wobugcisa onjengePenentent Magdalene nguAntonio Canova. UPalazzo Bianco ubonelela ngemisebenzi yobugcisa yase-Italiya, eFlemish, naseSpain, ngelixa uPalazzo Rosso emangalisa ngempahla yayo yoqobo kunye negalari yemifanekiso enemizobo eyenziwe nguVeronese, uGercercino, uDürer noVan Dyck.
Kwisitalato esinye, iPalazzo Nicolosio Lomellino yindawo yokwakha, enamagumbi e-stucco ahonjiswe ngeefresco zekhulu le-17 kunye negadi eyimfihlakalo eyimfihlakalo enemifanekiso eqingqiweyo yasentsomini. Ukutyelela ePalazzo Stefano Balbi, isihlalo seRoyal Palace Museum, lithuba lokufumanisa ubomi benkosi yaseGenoa neyase-Italiyane yenkulungwane ye-17, ngelixa uncoma iHolo lezipili, iGumbi leTrone, kunye neBallroom.
Kumgangatho ophezulu we-Spinola di Pellicceria Palace, egcina igalari yeSizwe yaseLiguria, umntu uza kujongana no "Ecce Homo" wobugcisa buka-Antonello da Messina. IPalazzo della Meridiana yahlulahlula isitayile senkululeko yoyilo-uCoppedè, kunye nePalazzo Centurione Pitto abachasene nezakhiwo eVia Garibaldi kwimijikelezo yayo yefresco.
Ngaphandle kweziko lembali yindawo enkulu yeVilla del Principe, indawo yokuhlala iRenaissance kaCharles V, apho iAdmiral Andrea Doria ijikelezwe ngumyezo obukekayo wase-Italiya ojonge ulwandle.
Phakathi kweendawo ezintle zasedolophini ezivulekileyo kulo msitho, kukwakho nenkulungwane ye-16 i-Villa Imperiale, enelayibrari yaseLercari, enepaki enomdla ehlelwe kwiindawo ezininzi zejometri- iVilla Duchessa di Galliera, elawula induli engaphezulu kwedolophu yaseVoltri kwaye inepaki yenkulungwane ye-18 enegadi yesitayile sase-Italiya; ingcwele kunye neqonga lomtshato elabhalwa ngo-1785; kunye neVilla Spinola di San Pietro, inkulungwane ye-17 patrician domus ebekwe kwikota yeGenoa nguSampierdarena.
I-Rolli Days Live kunye neDijithali ngumsitho ophakanyisiweyo kwaye uququzelelwe nguMasipala waseGenoa ngokusebenzisana neCandelo lezoRhwebo laseGenoa, iSebe lezeNkcubeko - uNobhala weNgingqi waseLiguria, uMbutho weRolli weRiphabhliki yaseGenoa, kunye neDyunivesithi yaseGenoa.